चीनले एक करोड १० लाख मानिसको को,रोना प,रीक्षण दश दिनमा गर्ला त?…हेर्नुहोस!
चीनमा को,रोना भा,इरस ‘को,भिड १९’ को प्र,भाव घट्दो छ। चीनको हुपेइस्थित वुहान शहर को,रोनाको उद्गमस्थल हो।
को,रोना सं,क्रमण दर शुन्यमा झरेसँगै गत अप्रिलबाट नै वुहानमा लागू गरिएको को,रोना वि,रुद्धका उपायहरु हटाइएको छ।
यसबीचमा चिनियाँ विज्ञहरुले को,रोनाको दोस्रो लहर ख,तरनाक हुनसक्ने अनुमान लगाएसँगै चीनले वुहानमा फेरि को,रोना भाइरसको प,रीक्षण गर्ने भएको छ।
केहीदिन अगाडि लामो समयपछि ६ जनामा को,रोना देखिएपछि वुहानमा पुनः प,रीक्षणको योजना बनाइएको हो।
वुहान शहरमा एक करोड १० लाख ८० हजार मानिस बसोबास गर्दछन्। चीन सरकारले वुहानका सबै नागरिकको को,रोना प,रीक्षण दश दिनमै गरिसक्ने घोषणा गरेको छ।
यसबीचमा के चीनले दश दिनमा यी सबै मानिसको को,रोना प,रीक्षण गरिसक्ला त भनेर विश्वभर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
हूबे डेली पत्रिकाका अनुसार वुहान शहरमा ६० भन्दा बढी को,रोना प,रीक्षण केन्द्र छन्। यी सबैले को,रोना प,रीक्षण गर्दा पनि एक दिनमा एक लाख प,रीक्षण मात्र गर्न सक्छन्।
यसको मतलब चीनले एक करोड १० लाख ८० हजारको को,रोना प,रीक्षण दशै दिनमा गर्नु चु,नौतीपूर्ण विषय हो। स्थानीय प्रशासनले पनि दश दिनमा सबैको को,रोना प,रीक्षण गर्न नसकिने सं,केत दिएको छ।
वुहानको रो,ग नि,यन्त्रक केन्द्र यस विषयमा भन्छ,‘शहरको केही जिल्लामा मे १२ बाट प,रीक्षण सुरु भइसकेको छ। मे १७ बाट अन्य स्थानमा पनि को,रोनाको जाँच सुरु हुन्छ। सबै जिल्लाले दश–दश दिनमा आफ्नो को,रोना प,रीक्षणको काम स,माप्त गर्नेछ।’
तर १३ मे मा समाचार संस्था रोयटर्सले वुहान शहरको कुल १३ जिल्लामा मात्र दुई जिल्लाले को,रोना प,रीक्षणको तयारी सुरु गरेको जनाएको थियो। चीन सरकारले पनि वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो भनाइ परिवर्तन ल्याएको छ।
अहिलेसम्म कतिको प,रीक्षण भयो?
स्थानीय संचारमाध्यमका अनुसार १४ मेसम्म वुहान शहरमा २७ लाखभन्दा बढीको को,रोना प,रीक्षण भइसकेको थियो।
तर वुहान विश्वविद्यालयमा बायोलोजी विभागका नि,र्देशक याङ जुहानकीले चीनको ग्लोबल टाइम्स पत्रिकासँग भनेका छन्,‘जब वुहानमा सं,क्रमणको सुरुवात भएको थियो। तबदेखि अहिलेसम्म करिब ४० देखि ५० लाखको परीक्षण भएको छ।’
स्थानीय संचारमाध्यम र त्यहाँका अधिकारीहरुको भनाइ पनि बाँझिएको देखिएको हो।
सरकारी त,थ्यांकका अनुसार वुहानमा एक करोड १० लाख ८० हजार मानिस बस्छन्। तर म,हामारीको बेला जनसंख्यामा तलमाथि भएको थियो।
स्थानीय प्रशासनका अनुसार जब २३ जनवरीमा वुहानमा ल,कडाउन सुरु भयो तब करिब ५० लाख मानिस चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन शहरबाट बाहिर गएका थिए।
चीन सरकारका अनुसार वहुानमा २३ जनवरीबाट क,लडाउन सुरु भएर ८ अप्रिलमा अ,न्त्य भयो। त्यसैले हालसम्म कति मानिस वुहान फेरि फर्किए त्यसको स्पष्ट जानकारी छैन।
के सबैको परीक्षण हुनुपर्छ?
वुहान विश्वविद्यालयका याङ जुहानकीका अनुसार वुहानका जुन क्षेत्रमा को,रोनाको अ,सर छैन र जहाँ नयाँ सं,क्रमित भेटिएका छैनन् त्यहाँ को,रोना प,रीक्षणको कुनै अर्थ छैन।
वुहान शहरका स्थानीय प्रशासनले को,रोना वि,रुद्ध नयाँ र,णनीति बनाएका छन्। रणनीतिअनुसार जो,खिममा रहेका मानिसमा को,रोना प,रीक्षण हुनेछ। यसमा वृद्धवृद्धा, बाक्लोबस्तीमा बस्ने ग,रिब मानिसहरु र स्वास्थ्यकर्मी पर्छन्।
गएको ७ दिनयता को,रोना प,रीक्षण गरिएका मानिसमा पुनः प,रीक्षण नहुने पनि यस र,णनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। बीबीसी